ကျန်းမာခြင်း, မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေး, interesnenkoe / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
"Surya namaskar" - ဒီဖြစ်ကောင်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကလူကအသုံးပြုသောလူသိအများဆုံးနံနက်ရှုပ်ထွေး Asana ဟာဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏နာမကိုပင် "Sun က salut" ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဤသည်ယောဂ technique ကိုရှိသမျှတို့, သွေးနှင့်တုံးမှာတက်စေ့စောင်ရေတိုးတက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးပွါး, ငါ့ကိုနှိုးနှင့်တန်ချိန်
အဘယ်အရာကိုငြီးငွေ့ moms ၏ရောဂါနှင့်အတူလုပ်ဖို့
ကျန်းမာခြင်း, မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
မိဘအုပ်ထိန်းသူပင်ပန်းနွမ်းနယ် - ကာ Insidious အရာ။ တဖကျတှငျအပေါငျးတို့မိဘများပင်ပန်းနေကြသည်, က 24 /7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်၏လုပျငနျးပါပဲ။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူအပေါငျးတို့အသက်ရှင်နေထိုင်လိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ရာ၌ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရန်, အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်သေနှင့်မ ...
ကျန်းမာခြင်း, ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေး, မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
သဘာဝကကလေးမွေးဖွား, cesarean အပိုင်း, oxytocin ဆွနှင့်ပင်ရေမွေးဖွားသို့မဟုတ်မြည်ဖြင့်လိုက်ပါသွား: အ XXI ရာစုဆေးပညာသူမ၏ကလေးသည်မွေးဖွားလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သူငယ်၏ကနျြးမာရေးပျေါတိုကျရိုကျသကျရှိသည်ဖို့ပထမသုံးနည်းလမ်းများ။
activated ကာဗွန်တပ်: သူတို့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေကြသည်မဟုတ်လော
activated မီးသွေးအများအပြား၏နှုတ်ခမ်းအပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ သွားကြောင်းသူကသာဝမ်းလျှောများအတွက်ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်ဆေးဝါးကက်ဘိနက်ထဲမှာသိုထားခဲ့ပါတယ်အခါရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့တွင်အာဟာရနှင့် cosmetology အတွက်အသစ်တခုဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွင်ထည့်သွင်းအစားအစာဘလော့ဂါများ၏အရောင်သည်အလင်းကိုလက်နှင့်အတူထုတ်ကုန်များ '' စိတ်မသာညည်းတွား '' အရောင်များ
ခြေအပေါ်အရိုးကျုံ့နှင့်ပျောက်ကွယ်သွား, ခြေအဆစ်နှောငျ့ယှကျပါဘူး! ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွား masterfully အဆိုပါအနှိပ်အမြင်ပိုင်ဆိုင်သည်။
ခင်ပွန်းနှင့်တွေ့ဆုံ ... သင်သို့ရာတွင်ထင်ပါနဲ့နေတဲ့ကိုလှိမ့ pin ကိုနှင့်အတူသန်းခေါင်ပြီးနောက်, နှင့်သူ့ဇနီး၏တံခါးခုံပေါ်အိမ်ပြန်? မျိုး၏အဘယ်အရာကိုမျှ! ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးကိုလှိမ့ pin ကိုနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုသိတယ်။ တစ်ဦးကိုလှိမ့ pin ကိုနှင့်အတူအနှိပ်ခံများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း - ကအသစ် fangled လမ်းကြောင်းသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တဖန်ရှိပါတယ်ဝက်မေ့လျော့သော်လည်း,
ငါးကိုဆီတောင့: အမျိုးသမီးများ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်ျာအသုံးပြုခြင်း။ အဘယ်ကြောင့်ငါးကိုဆီတောင့မိန်းမတို့အားအသုံးဝင်သောပါသလဲ
ကျန်းမာစားနှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးအပေါ်အလေးပေး - ကိုအကောင်းဆုံးခေတ်ပြိုင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခု။ ငါးကိုဆီတောင့ရောဂါများအတွက် panacea ထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအရေးအပါဆုံးအာဏာကိုထောက်ပံ့ရေးအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက်ငါးကိုဆီတောင့၏အကျိုးကျေးဇူးများအထူးမြင့်မားသည်။ ဒါဟာဘာလဲ -
တစ်မူထူးခြားသောမြက်အဖြစ်ကုစားခြင်း: ကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့စိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort ၏အသုံးပြုမှုကို။ Hypericum ၏ Contraindications နှင့်ကျန်းမာရေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပင်
ထိုကဲ့သို့သောစိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort အဖြစ်အပင်၏ငြိမ်းစေလျက်ဂုဏ်သတ္တိများပင်ရှေးခတျေတှငျတှေ့ပွီ။ မြက်အမျိုးမျိုးသောရောဂါနှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါများကုသ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်များဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်သိပ္ပံ detect နှင့်သိသိသာသာအသုံးဝင်သောများ၏စာရင်းတိုးချဲ့ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေဖန်ဆင်းတော်မူပြီ